Ku Mo Jo – Who is laughing now …. | MoeMaKa Burmese News & Media
Ku Mo Jo – Who is laughing now ….
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – တရားခံလား၊ တရားလိုလား၊ ရှေ့နေလား … လား လား လား
ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၃
ကာတွန်းစောငို - မီဒီယာဖြင့် ၀န်းရံခြင်း သီးခံပါ
ကာတွန်း ညီထွေး - အကြောင်းရင်းက ...
Maung Yit - Since Thein Sein needs outside Help, we no logner need Burmese Tatmadaw in Political Front ...